Sary Nandritra Ny Tontolo Androm-Pifidianana
2013-10-26 @ 08:07 in Politika
Efa nahazatra ny mpamaky ny VETO ny mahita sary rehefa tonga ny androm-pifidianana. Tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka 2010 ihany angamba no tsy nanao izany ny mpanoratra. Niverina indray izany ankehitriny. Ny faritra tsy noraisina an-tsary taloha indray no mba omena ny mpamaky fa tsy any amin'ny boriborintany voalohany taloha hatrany. Tontosa ity fakana sary ity noho ny fiaraha-miasa manokana amin'i News2Dago, raha tsy nisy azy sarotra ny hisian'ny sary atolotra etoana ka tsy maintsy lazaina izay ho fankasitrahana ny nataony sy ny fandavantena lehibe nataony. Mazotoa avokoa ary :
Toa mpinamana ireo delege tato amin'ity biraom-pifidianana Ambohimalaza ity. Hajo, Vital, Edgard ary Radavidson ihany no nanana delege tato.
Nikisaka teny amin'ny biraom-pifidianana iray tany Ambohimangakely izahay avy eo!
Hitanareo mihitsy angamba fa misy jiro ao anatin'ny efitra fisainana na dia ivelan'Antananarivo aza no misy ny toerana. Hiditra ny tanànan'Antananarivo isika ka tao Ambatomaro indray no nandalovana.
Izay ny tao Ambatomaro fa nikisaka nankao Nanisana izahay avy eo
Tao izahay no nahita mpitari-tolona iray tao amin'ny Magro ka nitafatafa taminy vetivety.
Vita izay dia niditra tamin'ny toerana vitsivitsy kokoa ny mpifidy hitanay, efa atoandro ningaingaina tokoa ny masoandro tamin'izany fotoana izany.
Vohibola, anisan'ny be mpanara-maso vahiny nandalo indrindra
Antsahabe, nahitako fa misimisy ihany ny olona tonga amin'ny fiarany manokana handeha hifidy. Dia izay no azo natolotra anareo etoana fa misy ihany koa ireo hafa any amin'ny #mdg2013 sy ao amin'ny Twitter-ko ao.
Asabotsy 26 oktobra 2013